Chirming Afisy - Famolavolana
Afisy Fony mbola tanora i Sook dia nahita vorona tsara tarehy iray teny an-tendrombohitra izy fa nandositra haingana dia lasa ny vorona, hany sisa tsy nisy feo. Nitraka tany an-danitra izy mba hahita ilay vorona, fa ny sampany dia ny sampana hazo sy ny ala ihany. Nihira foana ilay vorona fa tsy mahalala ny toerana nisy azy. Hatramin'ny mbola kely dia ny vorona no sampana hazo sy ala be ho azy. Ity traikefa ity dia nahatonga azy hanana sary an-tsaina ny feon'ny vorona toy ny ala. Mampionona ny saina sy ny vatana ny feon'ny vorona. Nahasarika azy ny saina, ary natambatany ny mandala izany, izay maneho ny fahasitranana sy ny fisaintsainana.
Anaran'ny tetikasa : Chirming, Anaran'ny mpamorona : Sook Ko, Anaran'ny mpanjifa : Sejong University.
Afisy Sook Ko Chirming